Toa tsy hoe fotsiny i Ilon Mask, izay tonga tao Metro Gala 2018 niaraka tamin'ilay mpihira vaovao Grimes, dia nitombo ny fiainany manokana. Amber Hurd, ilay mpiara-dia aminy taloha, dia nandeha tamin'ny daty iray niaraka tamin'i Heidi Klum namany.
Pair tsy nampoizina
Mandeha eny amin'ny lalan-tsarin'ny Lalao kostim-batana sy mandeha amin'ny hetsika, ny Talata, Amber Hurd, izay tsy natory, fa tsy natory tany an-trano, dia nandeha tany amin'ny fivoriana manan-danja iray, izay nanjary fantatra tamin'ny alàlan'ny paparazzi.
Amber Heard ao amin'ny Met Gala 2018
Vao miditra ny mitataovovonana, naka an-keriny ilay mpilalao sarimihetsika izy ireo, izay nipetraka teo amin'ny sehatry ny SUV mainty iray teny an-dalamben'i New York tao amin'ny orinasa mpanakanto Vito Schnabel.
Amber Hurd sy Vito Schnabel
Ilay mpilalao sarimihetsika 32 taona sy ny mpiara-dia aminy 30 taona dia nifantoka tamin'ny resadresaka ary tsy nanisy fiheverana ireo fakan-tsary mifantoka aminy amin'ny alàlan'ny varavarankelin'ny fiara.
Mandritra izany fotoana izany, ireo mpampiasa tambajotra dia miresaka momba ny fifankatiavana misy eo amin'i Vito sy Ember, izay tsy nifankahita teo aloha, satria nino fa tsy afaka hiaraka ireo roa ireo.
Araka ny voalazan'ireo mpikabary, Hurd, izay nanana hadisoana maro tamin'ny fanambadiana niaraka tamin'i Johnny Depp, dia tsy hilefitra amin'ny fahazaran-dratsin'i Schnabel, anisan'izany ny zava-mahadomelina sy ny fanentanana tsy tapaka miankavia. Ilay olon-tiany taloha, Klum, izay lasa tantara ho an'ny vehivavy teo aloha, dia efa zokiny kokoa noho ny tenany, dia tsy afaka mandray ny vozon'izany toy ny Amber henjana.
Vito Schnabel sy Heidi Klum
May Mask dia nanambara ny fahombiazan'ny fahombiazan'ny fandraharahana tany Forbes
Raha ny tombotsoan'ny mpilalao sarimihetsika any Vito, dia azon'ireo mpampiasa fa ny fihaonana niaraka taminy dia ny valinteniny amin'ny fisehoan'i Ilona avy amin'ny iray hafa ao Met Gala.
Ilon Mask sy Grimes tamin'ny Alatsinainy
Insider dia nanambara tsipiriany vaovao momba ny fitondran'i Beyonce
Tsy nieritreritra i Cameron Diaz, avy amin'ilay saribakaka marevaka
Ilay alika mahagaga indrindra eran-tany ary mpilalao sarimihetsika malaza amin'ny biby 6
Brad Pitt sy Marion Cotillard amin'ny tetikasa vaovao nosoratan'i Robert Zemeckis
Chris Jenner, 61 taona, mamorona bikini kely
Katie Holmes dia nifidy toerana ho an'ny fampakaram-bady
Goji - fikarakarana sy fambolena voankazo tsara ao an-jaridaina
Fandroana efitrano fatoriana - ahoana no fomba hifidianana ny safidy tsara indrindra?
Fiaramanidina mandeha amin'ny gorodona misy biriky
Fotoana, mora kokoa: kintana an-trano 20 eo am-piandohan'ny asa ary ankehitriny!
Kiraro fampakaram-bady tsy misy elatra
Fandaharanasa fanatanjahantena ho an'ny fahaverezan'ny lanja
Runny orona amin'ny teething
Hayden Panettiere dia nandray ny peratra fanoherana
Dill rano ho an'ny zaza vao teraka
Moa ve ny fisainana mahazatra?
Irina Sheik mialoha sy aorian'ny plastika
Nahoana no nofinofy ny famadihana?